Tag: nyo | Martech Zone
Anyị juputara na ozi sitere na mgbasa ozi mmekọrịta, ọchụchọ na igbe ozi anyị. Mpịakọta na-aga n'ihu na-arị elu. Enweghị m ihe na-erughị 100 iwu na igbe mbata m iji zipu ozi na ozi ọma. Kalenda m na agakọrịta n’etiti Blackberry, iCal, Kalịnda Google na Tungle. Enwere m Google Voice iji jikwaa oku azụmaahịa, yana MMail jikwaa ịkpọ oku na ekwentị m. Joe Hall dere taa na nchegbu nzuzo na iji data nkeonwe Google nwere ike